Yintoni efanelekileyo ukugqoka ubutsha busika
Kuyabonakala ngathi abayilimbi bangasinika into entsha ebusika? Yonke ixesha elide sele liyaziwa: ubomvu, iigebengu ezininzi, iindidi ezahlukeneyo zengubo, ijezi elifudumeleyo. Kodwa ke, hayi, hayi, kwaye into engavamile iya kukhanya. Makhe sibone ukuba yintoni enokufakeka ukugqoka abantu abatsha busika, siza kuqhelana nokuphononongwa kwimizila ebalulekileyo yebusika - eyaziwayo kwaye engaqhelekanga.
Fur . Ngaphandle koboya, ubusika obukhulu obuqhophololo - akukho ndawo. Kodwa sinikezelwa ukuba sinxibe le busika kungekhona nje ngeengubo, kodwa kunye nezixhobo ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, ezininzi iimpawu zeebhotile kunye neengxowa ngelo xesha zenziwe ngoboya. Ukongezelela, iziqwenga zengubo okanye iingubo zambethe zihlotshiswe ngeziqwenga okanye iifutha ezigcweleyo zobomi: ii-mantillas, iikholeji, i-miniskirts, i-sleeve, iikhabhi.
Velvet. I-Velvet iyafashisa kule busika phakathi kolutsha. Ukongeza kwi-velvet, i-velor, velveteen, iphosa. Izigqoko ezingabizi kuphela zigcotshwa kuzo. Ngaphandle kwengubo yansuku zonke, izinto ezivela kulezi zinto zisebenzisa (umzekelo, iingubo). I-velvet ebomvu engaphenduliyo.
I-Fringe ne-patchwork. Ngalolu hlobo, iifashthi zolutsha aluhluli. Umphetho uyindawo yonke indawo, kukho ininzi, kwaye iyahluka. Ukhangeleka kakhulu kwiimpahla zokugqoka ze-cocktail. Kwakhona nakwezinye iqoqo kukho i-hippy-chic kwisimbo se-70, kunye neentlanga. Ukhangelelwano olunomdla kakhulu kunye nomtya: isikhwele, isikhwama okanye ibhande lesikhumba. Olunye ubuliso olusuka kwisimboli se-hippie luyi-patchwork. Izinto ezininzi zibonakala ziboshwe kwiingubo ezahlukeneyo kunye nombala weeqhekeza.
Iizambatho kunye neebhatyi ezingenamikhono. Ezi zi-tweed classic kwisitala samadoda, iingubo zangasese ezingenamikhono, kunye neemvumba ezimfutshane kwisitayela semidlalo. Ezi zinto zambatho zimele zigqutywe ngeengubo zelinen.
Turtlenecks. Ukufudumala, okukhethiweyo kubusika kunye namaqabunga, imimoya, iziqhwala zekhephu. Kodwa kukho imodeli elula: ii-turtlenecks ezisuka kumatshini amancinci kunye neentsimbi ezihamba phambili. I-turtlenecks ingaba nemikhono emfutshane okanye ngaphandle kwayo. Ngokungathandabuzekiyo, i-silhouette yabo eqinile iphinde igxininise yonke iindlovu ezimnandi zesalathisi. Ngama-turtlenecks, iifestile ezinkulu zibukeka zikhulu, ezithembekileyo ngokufihla imilenze yowesifazane ukusuka kubanda.
Sheepskin. Oku akusiyo entsha kwaye ayikho into ebonakalayo ebutsha. Nangona kunjalo, ivakalisa uvelwano kwaye ikhangele ingqalelo rhoqo kumnini wezinto zokugqoka ezenziwe ngeengxowa zezimvu. Ngaphezu koko, ekwindla-ebusika ka-2011, kukho izitya ezininzi kunye neenkcukacha zengubo ezenziwe ngeengqayi zeegusha. Izinto eziphathekayo zithanda "iiglavu kunye nezikhwama.
Iibhatyi ze-Volumetric. Buhlungu! AbaDyuticians kunye ne-puhovichki kwakhona bayibona! Siyabona, ngakolunye uhlangothi, ukuchazwa kwamhlanje ngeengubo "zamathambo" kunye neebhatyi, ezithandwa ngaphezu kwee-80 zangekhulu lama-20. Ngakolunye uhlangothi, iikholeji zefashoni zebusika ngo-2010-2011 zigcwele izinto ezinqabileyo. Le ngqungquthela evela kuma-80, kodwa ngoku olu hlobo lwamabala angaphandle lukhangeleka kakhulu kwaye lukhangeleka. Isitayela sezemidlalo sokuqala sashintsha kwisigcawu seeshinikazi zamashishini zanamhlanje, azikhawulelwanga iimfuno zekhowudi kunye nokulungele ukulinga.
Ikhola ephakamileyo. I-vagaries yemozulu kwiminyaka yamuva iyanqinela abayili befestile ukuba batyelele "kwiinqwelo ezinzima" - i-collar ephezulu. Ikholeji ephakamileyo yanamhlanje ayiklwanga nje ukutsala ingqalelo kuwe, kodwa ukukhusela ekuphambeni imimoya kunye nokubanda okukhulu. Iingqinisiso zingahluka kakhulu. Ingaba, umzekelo, iingubo ezifudumeleyo ezindala ezenziwe ngamafayili amancinci ane-collar-down collar. Unako, ukuba kunyanzelekile, yiphakamise kwaye uyalibale malunga ne-blizzard yokubhoboza. Kwiiqoqo zasebusika, okwangoku, kukho ezininzi iimpawu zeebhatyi kunye neengubo ezinemibala ephezulu yezitayela ezingavamile. Abantu abaselula bayayixabisa kakhulu, kuba bakhangele intombazana nangemimozulu embi.
Iisokisi eziphezulu. Iisokisi eziphezulu - umkhangeli nje kuphela ngeenkwenkwezi. Mhlawumbi, phantse onke amantombazana ebuntwaneni bembethe igalofu. Kwaye ngoku abaqulunqi banikezela ukugqoka kunye nabafazi abadala. Ewe, le nto yinto ephikisanayo, kodwa ukuba unomfestile, kwaye nangona imilenze emilenze, ke kubalulekile ukubheka. Umqambi u-Alexander Van wawuquka iigalofu zezemidlalo eziphakamileyo ebusika kunye neengqungquthela zasehlobo. UJohn Galliano wanikela ngokuvulwa kwamasokisi aphakame ngamadolo e-Christian Dior House. Uphawu olusasaziwa nguCynthia Steffe kunye noJ. J. Crew bahlala kwiigalofu zegrey elula kwimimoya yamantombazana aseManhattan ukusuka kulutsha lwe-"Gossip Girl". Ungahlali kude nenkwenkwezi yobukhulu bokuqala: URihanna, uMiley Cyrus kunye noVanessa Hudgens sele bezama ngeemfutshane kunye neempuphu ezimfutshane zesoti eziphezulu eziphezulu. Mhlawumbi sifanele sijonge iigalufu?
Kwaye ukuba kunjalo, nento enxibayo? Eyona ndlela ikhethekileyo kukudibanisa iibhotile eziphezulu ngeebhotile eziphezulu okanye izibhotshi zokukhwela. Olu khetho olukhethiweyo, umzekelo, luya kubonakala lukhulu ngeengubo ezikhangekileyo kunye neengubo zokugqoka ezikwinqanaba kwisitayela sesikolo. Okanye ngeemfutshane ezimfutshane ezenziwa ngesikhumba okanye kwi-denim.
Isitayela seNtsha kaNyaka
Ukuthetha ngefashini yebusika akunakukungaziboni indlela yoNyaka omtsha. Ukudibanisa uNyaka omtsha-isiganeko asikho nje kuphela. Kuphawulekayo. Siphepha ikhasi elitsha kungekhona kwikhalenda kuphela, kodwa nakubomi bethu. Esi siganeko kufuneka sihlangane ngokuxhobile ngokupheleleyo! U-Eva wonyaka omtsha uyingcali. Njengoko udibana nayo, uya kuphila unyaka ozayo. Kwaye kungakhathaliseki ukuba siphi na kunye naye kunye naye, nakunoma kunjalo, sizama ukugqoka kakuhle kwaye sijonge yonke into eyi-100. Okubaluleke ngakumbi, sifuna ukukholisa isimboli sonyaka ozayo. Ngoko yintoni umnyaka we-White Rabbit?
Umbala woNyaka woNyaka omtsha. Ngo-2011 ngokwekhalenda yeMpuma, iya kuba ngumnyaka we-Metal White Rabbit (okanye i-Cat). Imibala ephambili yeza 2011 iluhlaza, igolide kunye nomhlophe. Isici sisinyithi. Ngoko, ukuba ukholwa kwiimpawu uze ulandele izithethe, ngoko ku-Eva kaNyaka omtsha kufuneka ukhethe ingubo yombala omhlophe, wegolide okanye obomvu. Nangona kunjalo, ezinye i-pastel shades zifanelekile. Ukuba ufuna ukubuyela kumklamo ofanelekileyo wombala, vumela ukuba ingubo yakho ihlotswe nge-sequin okanye i-sequin - I-Rabbit iyayithanda "insimbi".
Andiyithandi bonke abantu. Uya kudibana no-2011 kwinkampani enkulu kwaye ukwesaba ukuba ingubo yakho iya kudibanisa kunye nezinye izinto ezifanayo? Musa ukwesaba. Ngokomzekelo, ingubo yokuhlwa yama-classic okanye iingubo inokuxhaswa ngokunyakaza okulula kunye ne-bracelet yegolide, iintsimbi ezenziwe ngamaparele ezimhlophe, okanye i-scark ye-silk yembala efanelekileyo. Nangona iingubo zifana, izixhobo ziya kuzisa umfanekiso kwizinto ezintsha.
Ukuba awufuni ukunamathela ngokukhawuleza kumbala womnini-2011, ngoko ukhangele kwezinye iimfashini eziphathekayo. Omnye wembala yale nkathi yebusika ibomvu kunye nayo yonke imibala yayo: i-cherry, igromegranate, i-terracotta, i-maroon, i-pink, ebomvu, kunye ne-coral. Olubomvu umbala wokutshisa nokufudumala. Ugqoke imbobo ebomvu yobusuku, uya kucelwa ukuba uzenzele ingqalelo yonk 'ubani. Ingqungquthela ngaphandle kwemibala ebomvu neyibhakabhaka: i-turquoise, i-blue, aqua, i-aquamarine. Uhlala uhlala kwaye uhlala emfashini omnyama. Kwaye akunandaba nokuba iingubo ezimfutshane okanye i-blouse ethandekayo.
Izambatho zinefestile nazo ziyindlela yokufashisa imveliso kulo nyaka. Ngaphezu koko, kwiingubo ezinjalo uya kuhlala ukhangeleka kakhulu njengowesifazane. Ukuqwalasela ukugqoka nge-drapery. I-Drapery ifihla izinto ezithile ezingenakwenzekayo, ziguqulela kwi-nymph yesiGrike kunye nodadekazikazi. Olunye uhlobo lwezithethe zenkcubeko yasendulo kwinqaba, eliye laziwa kakhulu ngabantu abadumile befashini. Izambatho zilungele ngokukhethekileyo kwindlela yamaGrike yasendulo.
Isihlangu seCinderella. Izicathulo zokuzonwabisa azikho nto ngaphantsi kwesambatho okanye i-suit. Kwaye kuninzi: U-Eva wonyaka omtsha ubude kakhulu, eneemidanso, ngoko kukufanele ukhethe izicathulo ezipholileyo. Okanye, xa imeko yongxamiseko, ube nesibini esichusekileyo kunye nawe, oya kubeka xa imilenze idiniwe izicathulo. Ngoko, yintoni eyokuyeka? Kulo busika kuyimfashini ukugqoka ipulatifomu, umgca kwisithende esiphezulu nephezulu kakhulu. Kwiingqokelela zabaqulunqi, ngokuphindaphindiweyo kuninzi zikhona izicathulo zakudala ezinamaqatha aphilileyo. Ubuninzi bokuqhankqalaza kunye nokuhlobisa iintendelezo. Isipiko sonyaka sizicathulo kwii-heels-studs eziphezulu. Musa ukuyithanda? Emva koko ukhethe izicathulo ezihlanjwe ngoboya. Yaye qiniseka, umvundla uya kuwuxabisa.
Ukuba ukhethe iingubo ngendlela yamaGrisi, oko kungokoqobo, ke unake ingqalelo kwiidada ze-antique, ezihlotshiswe ngesiliva kunye negolide ephothiweyo. Izicathulo ezitsha zihlanganiswe ngokugqithiseleyo kunye neengubo ze-chiffon kwi-Empire style kunye nesinqe esiphezulu, isikhwele esikhanyayo se-taffeta enemibala eneentyatyambo, kunye neentambo ze-velvet zama-Victori okanye amabhulukwe e-satin, ngendlela yeenkwenkwezi zase-Hollywood zekhulu lama-20.
Imihlobiso yokuhamba. Ukuthabatha ingubo yonyaka omtsha, ungalibali ngokuhlobisa. Kutheni kuphuka umvundla? Imihlobiso ingenziwa kwintsimbi yexabiso eliqhelekileyo: isilivere, igolide elimhlophe neliphuzi, kunye neengubo zokugqoka iimpahla kunye neendwangu zendalo. Amatye aphuzi aya kujonga ngokukhethekileyo. Okuthandayo - amber. Nangona kunjalo, nceda uqaphele ukuba yonke into ifanele ibe ngokumodareyitha. Ngoko, umzekelo, ugqoke ngeemfounc, i-frills kunye nemigqabha iyanelisekile kwaye ayifuni iindumiso ezongezelelweyo. Iibhotile ezaneleyo ezintle.
Ngoko, sihlolisise ngokucacileyo ukuba kuyintoni imfashini yokugqoka ulutsha lo nyaka. Nangona kunjalo, ezi ngcebiso ziza kuba zifanelekileyo kubafazi beBalzac abaneminyaka engabesabi ngophando.
Ingxaki zasebusika 2015: i-snodes kunye nemihlali
Ithenda yehlobo - umendo-2016
"Musa ukukhawuleza!", Okanye ufanele ugqoke ingubo entwasahlobo ka-2015. Iifoto zemifanekiso ephumelele kakhulu
Bombers Women 2015
"I-Barefoot" ihlobo e-sandals ezifashisayo zango-2014
Indlela yokwenza i-home cozier yakho: 7 iingcebiso eziwusizo
Isobho semifuno ngeamaqanda ezinqamlezo
Izinto zokuphuhliswa kwengqondo zabantwana: ukudlala kunye nokunyanzelwa
Indlela yokuqala ukusayina i-valentine
Ukupheka i-rick porridge
Umhlobiso wendlela yoNyaka omtsha 2018 Izinja ezandla
Kwiimbewu: kunye nento yokugqoka ibhatyi eliphantsi kule nkwenkwezi
Ummbi kunye ne-sauce
Indlela yokucoca kakuhle amakhowe
Indlela yokudlala umhlobo kwifowuni ngo-Ephreli 1